တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ထပ်မံ ပေးပို့ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ San Juan မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနေရာဖြစ်သည့် အားကစားကွင်း၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မနီလာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ COVID-19ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး စီမံချက်အား ပံ့ပိုးရန် Sinovac CoronaVac ကာကွယ်ဆေးနောက်တစ်သုတ်အား တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်ပေးပို့ခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေးတွေကို အမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ Sinovac ကို ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်’’ ဟု နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးတာဝန်ခံ Carlito Galvez က လေဆိပ်၌ သတင်းထောက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ လာမည့်လများတွင် Sinovac ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုပေးအပ်လိမ့်မည်ဟူ မျှော်လင့်ထားကြောင်း Galvez ကဆိုသည်။ “ရောက်ရှိလာတဲ့ ကာကွယ်ဆေးအသစ်များကို ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတဲ့ဒေသတွေ ကိုပေးပို့သွားမှာပါ’’ ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှစ၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးများအားပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးများအား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအား မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေပေါင်း ၃၁ သန်းကျော်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ လူဦးရေ ၁၆ သန်းမှာ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် လူဦးရေ သန်း၇၀ အား ထိုးနှံနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
မတူကွဲပြားသော ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူများထံမှ ယနေ့အထိ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေပေါင်း ၅၆ သန်းကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက လက်ခံရရှိထားခဲ့ကြောင်း Galvez ကဆိုသည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်အထိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂,၂၂၇,၃၆၇ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၃၅,၁၄၅ ဦးရှိခဲ့သည်။ (Xinhua)
MANILA, Sept. 13 (Xinhua) — China delivered an additional batch of Sinovac CoronaVac vaccines to the Philippines on Monday to support the Southeast Asian country’s COVID-19 vaccination campaign.
“We thank China and Sinovac for the steady delivery of vaccines,” Carlito Galvez, an official in charge of the country’s vaccine procurement, told reporters at the airport.
Galvez said the Philippines expects more vaccine deliveries from Sinovac in the coming months. “The newly delivered vaccines will be distributed to areas with surging cases,” he added.
The Philippines has reportedatotal of 2,227,367 confirmed COVID-19 cases as of Sunday, including 35,145 deaths. Enditem